Espaniola ny lahatsary amin'ny chat, izay olona miteny espaniola, ny fifandraisana sy ny Fiarahana Rehetra lahatsary chats amin'ny toerana iray
Espaniola ny lahatsary amin’ny chat, izay olona miteny espaniola, ny fifandraisana sy ny Fiarahana Rehetra lahatsary chats amin’ny toerana iray
Mba hihaona olona vaovao, ary tsy mahalala azy manokana. Azonao atao ny mampiasa ny malaza hatrany ny asa fanompoana antsoina hoe ny lahatsary amin’ny chat. Mampiasa teny espaniola ny lahatsary amin’ny chat, dia afaka hahita ny namana eo amin’ny Talaky masoandro Iberika Saikinosy. Maro ny tanora no manandrana mba hahitana hoe inona ny hafatra dia malaza indrindra ao amin’ny tontolo izao amin’ny teny espaniola. Izany fanontaniana izany no voavaha tanteraka ny aseho loharano. Eto dia nanangona ny tena nitsidika ny lahatsary internet eo amin’izao tontolo izao. Misaotra azy ianao dia afaka mahita ny namana izay dia ho afaka ny hiresaka amin’ny mahaliana ny lohahevitra.
Toy izany tsotsotra olom-pantatra manolotra espaniola ny lahatsary amin’ny chat roulette. Izany no tanteraka tsy mitonona anarana, satria ny vavahadin-tserasera dia tsy manana na ny fisoratana anarana. Izany fanompoana izany no tena malaza amin’ireo vahoaka tanora. Eto tsy misy afa-tsy iray tombon-dahiny: dia tsara ny mahalala ny teny espaniola. Ary raha tsy fantatrao, dia tokony tsy hanahy be: dia ampy ny manana iraisam-pirenena malagasy. Afa-tsy ny Fiarahana, espaniola chat manana tombony kokoa. Voalohany, ianao dia afaka mahita ny tavan ny interlocutor. Izany dia azo atao na dia hihaona, raha tsy afa-po amin’ny lahy sy ny vavy, ny taonany na ny bika aman’endriny. Mba hahitana namana iray, tsindrio fotsiny ny bokotra sy any amin’ny manaraka ny kandidà. Ao amin’ny izany lalana ny ankizivavy dia afaka ny hivory hiaraka mahaliana bandy avy any Espaina (raha te-hiresaka Frantsa ianao dia eto). Marina ary ny lehilahy dia afaka misafidy ny mpiara-mitory tamiko. Ary faharoa, tsy te-handany ny fotoana mba hahazo ny fotoana lahatsoratra fifandraisana. Izany no mitranga eo amin’ny tena fotoana, ary izao ny asa fanompoana tsy mila mandoa vola na inona na inona saran’ny famandrihana.
Ity espaniola amin’ny chat dia tena tsy misy adidy
Izany dia tsy toe-javatra manokana ny olom-pantatra. Io fanapahan-kevitra io dia tsy maintsy ho fiaraha-mientana ifampizarana, ary izany ihany no mitranga ao amin’ny dingana ny fifandraisana. Ny lahatsary amin’ny chat dia manampy anao mba handamina haingana ny fivoriana. Marina sy hamita ny fifandraisana atao na ny antoko na oviana na oviana. Satria ny andaniny sy ny ankilany dia tena samy hafa: ny tsara sy ny mpiavonavona, tsy mahalala fomba sy saro-kenatra. Nefa tsy maintsy mandinika iray tena zava-dehibe: dia tokony ho vonona ho an’ny resaka. Voalohany isika dia tsy maintsy manapa-kevitra hoe inona no fiteny ny mifampiresaka tsara. Ary avy eo aho dia tsy maintsy manontany ny fanontaniana: iza no interlocutor, aiza, inona ny Fialam-boly. Zava-dehibe ny mahatakatra inona no antony tianao ny manomboka ny Fiarahana. Na raha toa ianao ka espaniola karajia mitady ny fanahy vady, ianao hamakivaky. Dia tsy ianao ihany no afaka tsindrio ny bokotra Manaraka, ary ny solontenan’ny mety ho mifamadika eny. Noho izany, nandritra ny resaka, tokony hanapa-kevitra haingana
← Tsy vaovao amin'ny Breziliana Brezila, tigra sy ny rehetra-rehetra-rehetra)
Mahafinaritra miaraka amin'ny olona ao Brezila ho an'ny fanambadiana sy ny fifandraisana lehibe →